COVID-19 ကို ကမ္ဘာ့နေရာအနှံ့မှာ ဖြစ်ပွားတဲ့ ကပ်ရောဂါအဖြစ် WHO ကြေညာ
ကူးစက်မှုတွေနဲ့ သေဆုံးမှုတွေ ပိုများလာမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားကြောင်း WHO အကြီးအကဲက ပြောပါတယ်။
COVID-19 ကို ကမ္ဘာ့နေရာအနှံ့မှာ ဖြစ်ပွားတဲ့ ကူးစက်မြန်ကပ်ရောဂါအဖြစ် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းက သတ်မှတ်လိုက်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တစ်မျိုးကြောင့် ကမ္ဘာ့နေရာအနှံ့မှာ ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှု pandemic ဖြစ်တာမျိုး ကျွန်တော်တို့ တစ်ခါမျှ မမြင်ဖူးခဲ့ဘူး
ယခုအခါ COVID-19 ကို ကမ္ဘာနေရာအနှံ့မှာ ဖြစ်ပွားတဲ့ ကူးစက်မြန်ကပ်ရောဂါ (pandemic) အဖြစ် သတ်မှတ်ဖော်ပြနိုင်ကြောင်း ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း (World Health Organization - WHO) အကြီးအကဲ Tedros Adhanom Ghebreyesus ဂျနီဗာမြို့မှာ သတင်းထောက်တွေကို ပြောပါတယ်။ COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုနဲ့ ပြင်းထန်မှုတို့နဲ့အတူ ဗိုင်းရပ်စ်ကိုတိုက်ဖျက်ရန် ဆောင်ရွက်နိုင်မှု မရှိခြင်းက ၎င်းကို စိုးရိမ်စေခဲ့ကြောင်း WHO အကြီးအကဲက ဆိုပါတယ်။
"ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တစ်မျိုးကြောင့် ကမ္ဘာ့နေရာအနှံ့မှာ ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှု pandemic ဖြစ်တာမျိုး ကျွန်တော်တို့ တစ်ခါမျှ မမြင်ဖူးခဲ့ဘူး" လို့ ၎င်းက ပြောပါတယ်။ လာမယ့် ရက်များနဲ့ သီတင်းပတ်များအတွင်း COVID-19 ကူးစက်မှုတွေနဲ့ သေဆုံးမှုတွေ ပိုများလာမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားကြောင်းလည်းTedros က မတ်လ ၁၁ ရက်မှာ ပြောခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှု ဆိုးဆိုးရွားရွားဖြစ်နေတဲ့ အီရန်နိုင်ငံက ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုထိန်းချုပ်ရန် အကောင်းဆုံး ကြိုပမ်းနေခဲ့ပေမဲ့လည်း အထောက်အပံ့များ ပိုမိုလိုအပ်နေတယ်လို့ WHO အကြီးအကဲက မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ အီရန်နဲ့ အီတလီဟာ လက်ရှိမှာ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနဲ့ သေဆုံးမှု ဆိုးရွားနေပြီး အခြား နိုင်ငံတွေလည်း မကြာမီ ၎င်းတို့ကဲ့သို့ ဖြစ်လာမယ်လို့ WHO အကြီးအကဲက ဖြည့်စွက်ပြောပါတယ်။ အစိုးရများအနေနဲ့ COVID-19 ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုအပေါ် အဆောတလျင်နဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုဖြင့် ကိုင်တယ်ဖြေရှင်းမှုပုံစံ ပြောင်းလဲကြရန် Tedros က တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
ကူးစက်မှုတွေနဲ့ သေဆုံးမှုတွေ ပိုများလာမယ်လို့ မျှော်လင့်ထားကြောင်းလည်း Tedros က ပြောခဲ့ပါတယ်
"နိုင်ငံအချို့က ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကို ထိန်းချုပ်နိင်ကြောင်း လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ပြခဲ့ကြတယ်၊ လက်ရှိမှာ ကူးစက်မှုတွေ စုပြုံဖြစ်ပွားနေတာကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေတဲ့ နိုင်ငံအများအပြားအတွက် စိန်ခေါ်မှုက သူတို့ရော အဲဒီလို လုပ်နိုင်မလား? လုပ်ကြမလား? ဆိုတာပါပဲ" လို့ WHO အကြီးအကဲက ပြောကြားကြောင်း BBC သတင်းမှာ ဖော်ပြပါတယ်။
အစိုးရများအနေနဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ရေး ဆောင်ရွက်ကြရာမှာ ကျန်းမာရေးကို ကာကွယ်ခြင်း၊ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမှု နည်းစေခြင်းနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးတွေကို လေးစားခြင်းတို့ကြား ချိန်ညှိရမယ်လို့လည်း ၎င်းကဆိုပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်က တစ်ကမ္ဘာလုံးကို အန္တရာယ်ရှိနိုင်မှုအခြေအနေ မြင့်မားကြောင်း WHO က ဇန်နဝါရီ ၂၇ ရက်မှာ စတင်သတိပေးခဲ့ပါတယ်။
ထို့နောက် ဇန်နဝါရီ ၃၀ ရက်နေ့မှာတော့ COVID-19 ရောဂါဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုကို ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အများပြည်သူ ကျန်းမာရေး အရေးပေါ်အခြေအနေအဖြစ် WHO က သတ်မှတ်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ WHO က COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုဟာ pandemic ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အလားအလာအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကြရန်လည်း ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၄ ရက်နေ့မှာ သတိပေးထားခဲ့ပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှု တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အန္တရာယ်သတိပေးချက်ကို အမြင့်ဆုံးအဆင့်အဖြစ် WHO က ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၈ ရက်မှာ တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူ ၁၂၁,၃၀၈ ဦးရှိလာခဲ့ပြီး ၄,၃၈၄ ဦးအထိ မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်
မတ်လ ၁၁ ရက် ညပိုင်းအထိ စာရင်းတွေအရ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း COVID-19 ရောဂါဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူ ၁၂၁,၃၀၈ ဦးရှိလာပြီး သေဆုံးသူအရေအတွက် ၄,၃၈၄ ဦးအထိ မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအရေအတွက် ထက်ဝက်ကျော်မှာ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေ တွေ့ရှိထားရပြီး မတ်လ ၁၁ ရက် ညပိုင်းအထိ ပြန်လည်သက်သာလာသူ ၆၆,၇၀၂ ဦးရှိခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။